Realme Watch 2, ọnụ ala ntinye ọnụ ala dị ọnụ ala na wearables | Akụrụngwa Akụkọ
Realme Watch 2, usoro ntinye ọnụ ala dị ala na wearables
Miguel Hernandez | 06/07/2021 13:00 | Ngwa, General, Nyocha, smartwatch
Realme na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ịnye ọnụego mgbanwe maka ego na ngwaọrụ ya wee kwado Xiaomi na ókèala nke ọ dị ka ọ bụ naanị ya na-achị ya. Dị ka onye na-ama ya aka, Realme abanyelarịrị na ngwaahịa dịgasị iche iche, na elele agaghị adị iche.
Anyị na-elebanye anya na Realme Watch 2 ọhụrụ, ụdị dị ọnụ ala nke Realme watch iji dọta ndị ọrụ na weara ya nke mbụ. Chọpụta anyị ahụmahụ anyị nwere na ihu ụlọ ọrụ Asia na ọ bụrụ na ọ bara uru n'ezie maka ọnụ ala ya.
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị esonyere nyocha a na obere vidiyo site na ọwa anyị YouTube, n'ime ya ị ga-enwe ike ịghọta maka nbudata zuru oke nke Ezigbo Realme 2 yana usoro nhazi nke mbu na di nfe. Were ohere ịdenye aha na chanel anyị YouTube Maka otu a ị nwere ike isi nyere anyị aka ịga n'ihu na-ewetara gị nyocha nke kachasị ezi na weebụ. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ọnụahịa dị na Amazon dị ala nke na ọ ga-eju gị anya.
1 Design: Mgbaaka nke chọrọ ibu igwe elekere
2 Njikọta na sensọ
3 Ihuenyo na nnwere onwe
4 Jiri ahụmahụ
Design: Mgbaaka nke chọrọ ibu igwe elekere
N'ihe banyere imepụta ihe, ihe ijuanya nke Realme Watch a juru anyị anya, e wuru ya na "jet black" plastic, ụdị nke nwere mmasị pụrụ iche na ọkọ. Na ọdịdị ọ bụ elekere, nwere ọdịdị ọdịnala na oke maka ihe smartwatch bụ, agbanyeghị, ozugbo anyị gbanyere ya, anyị ghọtara na ọtụtụ n'ihu bụ bezel, ana m eche na ihe dịka 35% ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa, na nke ahụ bụ n'ihi obere akụkụ nke 1,4-inch maka akụkụ nke 257.6 x 35.7 x 12.2 millimita. Dịka anyị kwuru, ibu dị oke ala, naanị gram 38 na-eme ka ị na-eche, Ned Flanders ịke, dị ka ị na-yi ihe ọ bụla.
Ọ nwere otu bọtịnụ akụkụ nke plastik dị iche, nke nwere uzo zuru oke maka iji ihe eji eme omenala ma nke ahụ na - eme ka obi anyị dị jụụ.
Anyị nwere otu ọnọdụ magnetized odori isi, Site na ntụtụ ọla abụọ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ogologo zuru ezu. O nwere eriri 22-millimita nke silicone nwere mmechi pụrụ iche. Ihe a zuru ezu ma chekwaa maka ọtụtụ nkwojiaka, ọ bụ ezie na mgbanwe ya nwere ike ime ka ị mee ka ọ sie ike karịa ka ọ dị mkpa site na ndudue, dịka o mere anyị. Eriri akpapu maka ojiji mgbe niile O nwere "ikedo" zuru ụwa ọnụ, n'ụkpụrụ anyị ga-enwe ike idowe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe anyị chọrọ, ọ bụ ezie na Realme ji n'aka na ọ ga-ebupụta eriri dị iche iche na ndụ bara uru nke ngwaọrụ ahụ.
Njikọta na sensọ
Realme emebeghị data ọha banyere processor, RAM na nchekwa nke Realme Watch a. Banyere nke ikpeazụ, anyị na-eche na ọ bụ naanị iji nwee akụkụ dị iche iche a na-ahụkarị, ma ọ dịkarịa ala na-eburu n'uche na njikwa nke ọdịnaya multimedia ejedebere na njikwa dịpụrụ adịpụ nke ngwaọrụ mkpakọ. Maka ihe a niile, ọ na-eji ya Bluetooth 5.0 na mfe njikọ via Realme Link, nke anyị na-echeta, dakọtara na gam akporo na iOS.
Ọ nwere atọ axis accelerometer iji gbakọọ mmegharị ahụ nke ọma na nyochaa mgbatị anyị dị ka o kwere mee. Anyị nwere n'otu oge ahụ kpochapụwo ihe otiti obi ma na-gbakwụnye site a ihe ikuku oxygen n'ime ọbara nke juru ebe niile n'oge a. Ike ole na ole ka anyị nwere ike ịkọ, anyị enweghị WiFi ma ọ bụ GPS, o doro anya na anyị echefuru banyere LTE ma ọ bụ teknụzụ ikuku ọ bụla ọzọ, mana n'ezie, anyị na-ekwu maka ngwaọrụ onye ọnụ ya bụ ihe ọchị, Onweghi onye ga - ajụ gị maka ihe ọ bụla karịa ihe ị nwere na ngalaba ọrụ aka. Okwesiri ikwuputa na nwanne ya nwoke "Pro" nwere ikike GPS ichoputa onwe ya.
Ihuenyo na nnwere onwe
Anyị chọtara otu panel nke de 1,4 sentimita asatọ, na-enye ngụkọta mkpebi nke 320 x 320 pikselụ, ya bụ, njupụta nke pikselụ 323 kwa inch. Ọ bụ ihe ijuanya na mkpebi ahụ dịtụ ala karịa nke nwanne nwoke "Pro", na-enye pikselụ njupụta nke dị elu karịa nke ụdị "dị oke ọnụ" nke ngwaọrụ ahụ. Ihuenyo ahụ na-enye ntọala nchapụta dị iche iche maka ogwe LCD ya, na nnwale anyị ka o gosipụtara karịa ezuru Maka ojiji nke ụdị dị iche iche, na-agbachitere onwe ya n'ụzọ ziri ezi ma mgbe ị na-egosipụta ọdịnaya yana mgbe gị na ya na-emekọrịta ihe, ọ na-aza n'ụzọ ziri ezi na mmekọrịta anụ ahụ.
Banyere batrị, anyị nwere 315 mAh nke na-enye oge usoro iwu dị ka Realme nke dị ihe dị ka ụbọchị 12, N'ime ule anyị, anyị eruola ụbọchị nke iri na enweghị nsogbu, Ọ bụ ezie na ọkwa erubeghị site na akara ahụ eruteghị, ọ na-anọ ezigbo nso, ọ ga-adabere na ojiji nke ngwaọrụ site na onye ọrụ ọ bụla. Ego zuru ezu ga-ewe anyị ntakịrị elekere.
Anyị ahụla ngwaọrụ nwere arụmọrụ nke ọma nke ọma akara, ọbụlagodi na ịnwere smartwatch dị elu ị ga-amara na 90% nke ihe ị na-eji dị na nke a Realme Watch 2, ọ bụ ezie na ahụmịhe ahụ, ee, doro anya na ọ dị ọnụ ala. Anyị nwere usoro amụma ihu igwe, ihe karịrị ụdị ọzụzụ dị iche iche 90 na usoro ndị bụ isi maka nlekota egwuregwu oge niile, ihe a niile ka egosiri na Realme njikọ, ngwa nke na-enye nchikota na anya amachaghị, mana nke ahụ ga - enyere anyị aka ịgbanwe ngalaba ọsọ ọsọ.
Amụma ihu igwe (amabeghị asụsụ Spanish)
Ihe ncheta mmiri
Chọta ọnọdụ ekwentị
Igwefoto ime akara
Ihe Mgbaru Ọsọ Mgbaru Ọsọ nke Dailybọchị
Onye na-atụgharị uche na-atụgharị uche
Ngwaọrụ nwere IP68 na-eguzogide mmiri, Ọ bụ ezie na emeghị ya iji soro ya gwuo mmiri, ọ ga-eguzogide ọgwụ splas isi, ya mere ọ ga-eguzogide ọzụzụ anyị na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Anyị nwere, dịka anyị kwuburu na mbụ, mgbaaka nke chọrọ ịbụ elekere. Ihuenyo nwere oke akụkụ nke buru ibu karịa ka ọ dị na mbụ, mana ọrụ adịghị agafe ihe a na-enye site na ọzọ na ọnụahịa, Xiaomi Mi Band 6. Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwaọrụ nwere aesthetics na ihe arụ ọrụ, Maka euro 50 ọ na-efu, enwere ụzọ ole na ole dịka Realme Watch 2.
Ihe na: 6 2021 XNUMX
Mgbanwe ikpeazụ: 5 2021 XNUMX
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Realme Watch 2, usoro ntinye ọnụ ala dị ala na wearables
Huawei WiFi AX3, rawụta ị ga-enwerịrị imezi njikọ gị
Jiri nwayọ jiri njem a n'oge ụgbọ oloko a